Ukulimala okuningi nokukhishwa kwabantu ngenxa yezimvula ezinamandla | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokunikezwa kwesibikezelo sezulu esenziwe ezinsukwini ezisanda kwedlula, izifundazwe eziyishumi nanye zaseSpain Babekwe eqaphile ngenxa yezimvula ezinamandla neziphepho. Ikakhulukazi, banamandla eCádiz, Malaga, Valencia naseTarragona.Zonke izixwayiso ezinikeziwe zisezingeni “eliphuzi”, okusho ubungozi ngenxa yemvula enamandla kakhulu. Kodwa-ke, izexwayiso ezinikezwe eCádiz, Malaga, Tarragona naseValencia ziphakanyiselwe ku "orange", okukhombisa izingozi ezibaluleke kakhulu.
ECádiz, izimvula ezinamandla zenza kube nzima ukuhamba kwezimoto emigwaqweni eminingi futhi izikhukhula zidala ukulimala okuningi okuphoqe ukusikwa kwemigwaqo eminingana kunethiwekhi.
Kutholakale indoda eneminyaka engu-54 ubudala ushonile kumasipala waseConil de la Frontera (Cádiz) ngemuva kokuvaleleka kugandaganda ayesebenza kuwo. Wayesepulazini ngesikhathi ebhajwe. Imeya yaseConil, uJuan Bermúdez, uthi lo mcimbi awuhlangene neze nezikhukhula ezenzeka kuleli dolobha.
Ngakolunye uhlangothi, owesifazane uyalandela wanyamalala ngemuva kokuthi imoto abehamba ngayo ikhukhulekile. Le ntokazi yayihamba idolobha iSant Llorenç d'Hortons eBarcelona, ​​kanti izimvula ezinamandla zidale izikhukhula ezikhukhule izimoto eziningi. Owesilisa abehamba naye ukwazile ukwehla emotweni ngesikhathi eshaya isihlahla, wakwazi ukubamba igatsha waphuma ngefasitela.
Ama-ejenti amaningi abambe iqhaza ekufuneni lo wesifazane. Phakathi kwabo sithola izicishamlilo, indiza enophephela emhlane, amalungu eqembu lezenzo ezikhethekile zezintaba nezingaphansi kwamanzi kanye neCanine Search Group, kanye neMossos d'Esquadra, abasebenza emaphandleni kanye namavolontiya okuvikela umphakathi.
Amakhulu abantu abuye ahlukaniswa ngenxa yezikhukhula eVejer (eCádiz). Izinhlangano zokuphepha neziphuthumayo azikaze zenze ngendlela eyejwayelekile futhi kudingeke ukuthi zenze okuthile ukusiza abantu ngokuvula isikhungo sezemidlalo sikamasipala ukuze kusizakale imindeni obekufanele iphume emakhaya.
Ekugcineni, eMurcia, sithola ukuthi ezinye izicishamlilo zikwazile ukuhlenga owesilisa obenemoto ebibhajwe emgwaqeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » Umonakalo omkhulu nokukhishwa kwabantu ngenxa yezimvula ezinkulu